Gamsei Ny - Famolavolana
Ny Rehefa nosokafana i Gamsei tamin'ny 2013, dia nampidirina tamin'ny sehatry ny fanazaran-tena ny hyper-localism izay hatramin'izay dia natokana ho an'ny sehatry ny sakafo. Ao amin'ny Gamsei, ny ala ho an'ny sotrokely dia na ny zezika voavoly na ny valan'ireo tantsaha artesianina eo an-toerana. Ny fisolokiana anatiny dia fanohizana mazava amin'ity filozofia ity. Tahaka ny akoho ihany, Buero Wagner no naka ny fitaovana rehetra teo an-toerana, ary niara-niasa akaiky tamin'ny mpanamboatra eo an-toerana mba hamokatra vahaolana namboarina. Gamsei dia eritreritra feno mitambatra izay mamadika ny hetsika fisotroan-dronono lasa zava-baovao.
Anaran'ny tetikasa : Gamsei, Anaran'ny mpamorona : BUERO WAGNER, Anaran'ny mpanjifa : Trink Tank.
Ny BUERO WAGNER Gamsei